Orinasa sy mpamatsy efitrano fanaovan-tsakafo any Sina - Puhua
Home > Products > Trano fanamoriana fasika > Efitra sandblasting
Ny efitrano Sandblasting dia misy ampahany roa, ny ampahany voalohany dia ny rafitra fanapoahana, ny iray kosa ny fanodinana fitaovana fasika (ao anatin'izany ny gorodona miverina amin'ny fasika, ny fanodinana voazarazara), ny rafitra fisarahana sy ny fanalefahana (ao anatin'izany ny fanesorana vovoka amin'ny efitrano sy feno). Ny fisidinana dia matetika ampiasaina ho mpitatitra entana.
Sandblasting Room dia namboarina manokana hanokana fepetra takiana amin'ny fitsaboana ambony ho an'ny faritra lehibe, fiara, kamio fanary ary ny hafa.
Ny fipoahana ny tifitra dia ampiasain'ny rivotra voahidy, ny haino aman-jery manimba dia aingana ho 50-60 m / s misy fiantraikany amin'ny sehatry ny sangan'asa, io dia fomba tsy ifandraisana, tsy dia mandoto loatra ny fitsaboana eny ambonin'ny tany.
Ny tombony dia ny lamina miovaova, fikojakojana mora, fampiasam-bola tsy indray mandeha sns sns, ary noho izany dia malaza be amin'ireo mpamokatra faritra.
Endri-javatra manan-danja amin'ny efitrano Sandblasting:
Ny fanodinana sandblasting dia afaka manadio tanteraka ny sehatry ny asa amin'ny famafazana welding, harafesina, fidinana, menaka, fanatsarana ny firakotra amin'ny rindrina, hahatratra tanjona anti-harafesina maharitra. Ho fanampin'izany, ny fampiasana fitsaboana voatifitra voatifitra, izay afaka manafoana ny fihenjanana amin'ny sehatry ny asa sy manatsara ny hamafiny.
Spray Booths dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanamboarana sambo, ny milina ary ny milina fanaovana injeniera, ny milina petrochemical. Izy io dia azo noforonina arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Shot Blasting Chamber dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanamboarana sambo, ny milina ary ny milina fanaovana injeniera, ny milina petrochemical. Izy io dia azo noforonina arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Sand Blasting Booth miaraka amin'ny Abrasive Automatic Recovery System dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanamboaran-tsambo, ny milisy ary ny milina fanaovana injeniera, ny milina petrochemical. Izy io dia azo noforonina arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Ny efitra fanaovana hosodoko amin'ny fantsom-bozaka Sand Blast Booth / Spray booth dia manome tontolo iainana mihidy ho an'ny fiara hosodoko amin'ny fifehezana tsindry. Araka ny fantatsika fa ny vovoka, ny mari-pana mety sy ny hafainganan'ny rivotra dia ilaina amin'ny hosodoko. io dia azo fehezin'ny vondron-drivotra marobe, ny rafitra fanafanana ary ny rafitra sivana sns. Ny rivotra miabo vokarin'ny mpamaky dia afaka manampy ny booth spray hitazona mari-pana mety, fikorianan'ny rivotra ary ny fahazavana.
Ny efitrano fandokoana fiara / boite Spray dia manome tontolo iainana mihidy ho an'ny fiara hoso-doko amin'ny fanaraha-maso ny tsindry. Araka ny fantatsika fa ny vovoka, ny mari-pana mety ary ny hafainganan'ny rivotra dia ilaina amin'ny hosodoko. io dia azo fehezin'ny vondron-drivotra marobe, ny rafitra fanafanana ary ny rafitra sivana sns. Ny rivotra miabo vokarin'ny mpamaky dia afaka manampy ny booth spray hitazona mari-pana mety, fikorianan'ny rivotra ary ny fahazavana.
Booth fanapoahana fasika fanarenana
Recovery Sand Blasting Booth dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanamboarana sambo, ny milina ary ny milina fanaovana injeniera, ny milina petrochemical. Izy io dia azo noforonina arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Easy-Maintainable Efitra sandblasting dia azo namboarina manokana avy any Puhua. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy any Shina. Ny volavolainay dia misy lamaody, mandroso, vaovao, mateza ary singa vaovao hafa. Afaka manome toky anao izahay fa ny kalitao avo lenta Efitra sandblasting dia amin'ny vidiny ambany. Ny vokatra vokarinay any Sina dia antenaina ho lasa iray amin'ireo marika. Tsy manahy momba ny vidinay ianao, afaka manome anao ny lisitry ny vidinay izahay. Rehefa mahita ny teny nalaina ianao dia hahita ny fivarotana farany indrindra Efitra sandblasting miaraka amin'ny fanamarinana CE azo vidiana amin'ny vidiny mora. Satria ny tahirin-tsolika ataonay dia ao anaty tahiry, azonao atao ny mividy fihenam-bidy amin'ny ampahany betsaka aminy. Azonao atao ihany koa ny manome anao santionany maimaimpoana. Manantena ny hiara-miasa aminao.